ezinye izimpawu ze-coronavirus - Ilanga News
Home Izindaba ezinye izimpawu ze-coronavirus
ezinye izimpawu ze-coronavirus
SEYENGEZE izimpawu eziwu-6 kwezibonakala kumuntu osehaqwe yi-coronavirus iThe Centre for Disease Control and Prevention yase-USA.
Umbiko walesi sikhungo ngalezi zimpawu ushicilelwe kwiThe New York Times yase-USA ngoMsombuluko.
Phambilini besinohlu olunezimpawu ezintathu: yimfiva, wukukhwehlela nephika.
Izimpawu eziwu-6 esezengeziwe, okunukwa leli gciwane ngazo:
* ukuqhaqhazela okuhambisana nokugodola,
* wubuhlungu bemisipha,
* wubuhlungu bekhanda,
* wumphimbo obuhlungu,
* yisimo esisha sokungalizwa iphunga nokunambitheka kwezinto ezidliwayo.
Nokho-ke lezi zimo ezehlukile kumuntu nomuntu ziba yiqoqo.
Elinye iqoqo lezimpawu ngelabantu abakhwehlelayo, abanephika kumbe abaphefumula kanzima.
Elinye kuba ngelabantu ababika okubili kwalokhu okulandelayo: wukugodola, yimfiva, wukuqhaqhazela, wubuhlungu bezicubu zomzimba, wubuhlungu bekhanda, wumphimbo ovuvukele noma wukungakwazi ukuzwa iphunga noma ukunambitheka kwento edliwayo.
Kubikwa ukuthi uhlu lwalesi sikhungo lwehlukile kolwezimpawu ezichazwa yinkundla yokuxhumana yeWorld Health Organization (WHO).
NgokweWHO, izimpawu ezivamile kunezinye yimfiva, wukukhwehlela okomile nokukhathala.
“Ezinye iziguli zizwa izinhlungu nokuqaqamba, wukucinana emakhaleni, wumphimbo obuhlungu noma uhudo,” kusho iWHO.
Lezi zimpawu ziye ziqale kancane, kancane ziye ngokwenyuka.
Zombili lezi zinhlangano zincoma ukuthi abantu bafune usizo oluphuthumayo lwezokwelapha nxa benenkinga yokuphefumula noma benezinhlungu ezingapheli kumbe benengcindezi esifubeni.
AbeCentre for Disease Control and Prevention, bathi kumele kuphuthunywe kufunwe usizo lokwelashwa nxa abantu beba nokudideka kwengqondo noma izindebe zomlomo nobuso kuba nombala osasibhakabhaka.
Previous articleKWEHLE AMAPHAPHU ITHEKU lehliselwa KU-LEVEL 4
Next articleUBen 10 ugaqelwe yikilabhu yase-England